Indlela yokuphila ye-resort, i-Paradise Island Gold Coast - I-Airbnb
Indlela yokuphila ye-resort, i-Paradise Island Gold Coast
Yiza, wonwabele uze uphumle kule flethi okanye indlu ekwicomplex entle eyi-1 ekwicomplex yethu ekwiParadise Island.
* * * I-WIFI YASIMAHLA * * *
Efanelekileyo onokuzikhuphela kuyo ngempela-veki okanye ukuhlala ixesha elide. Yonwabela ukubona le flethi okanye indlu ekwicomplex. Gcwalisa ngeti/ikofu efumanekayo, i-microwave, i-toaster kunye nebhari yefriji. Nceda uqaphele: kukho indawo yokuphekela kodwa ayikho ioveni.
Lala kwindawo etofotofo kunye nebhedi enkulu.
Ibhedi eyisofa kwindawo yokuhlala.
Igumbi lokuhlambela elinegumbi lokuhlambela eline-shower phezu kwebhafu. Iitawuli zokuhlamba nezaselwandle ziyafumaneka.
Njengoko ezi flethi okanye izindlu ezikwicomplex ezingekho seflethi okanye izindlu ezikwicomplex, sikunika ipakethi yokuqala eza kukulungela: iti, ikofu, iphepha lasethoyilethi, ishampu, i-conditioner kunye nokuhlamba umzimba, ukuhlamba nokuhlamba izitya.
Iindwendwe kulindeleke ukuba zithenge izinto ezongezelelekileyo njengoko kufuneka.
Indawo yeholide yaseParadise ikwiparadesi yabadlali be-surfing, ngoko iindwendwe ziza kuba phakathi kwemizuzu eyi-5 xa zihamba ngeenyawo ukusuka kumalwandle amahle aseGold Coast, phakathi kwiindawo zokonwaba ebusuku kuquka iivenkile zokutyela, iibhari kunye neeklabhu. Kubantwana kunye neentsapho, iparadesi yabadlali be-surfing, izinto ezonwabisayo nezivuyisayo zilindile e-Timzone, i-bowling kunye ne-infinity. IGold Coast ikwanazo neepaki eziyi-4 eziphambili.
Iindwendwe ziyakwazi ukuthumela umyalezo nge-bnb emoyeni ukuba kuyimfuneko kwaye siza kuphendula zingekapheli iiyure eziyi-24